Nhasi ndiro zuva raunofanira kushanyira San Marino: Mutambo weSan Marino
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Nhasi ndiro zuva raunofanira kushanyira San Marino: Mutambo weSan Marino
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • San Marino Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Nguva yakanakisa yekushanyira San Marino nhasi. Musi waGunyana 3 gore rega rega, vanhu venyika diki yeEuropean vanopemberera kuvambwa kweiyo San Marino Republic mazana emakore apfuura. Kune zvakawanda zvezviitiko zvekusangana nekupupura pazuva rino, kusanganisira zviitiko zveyambuko, makwikwi ekusimudza mureza, uye konzati yakanaka nemauto.
Vashanyi kuSan Marino vanogona kutenga vhiza ye EURO 5,00, asi zvinongo gadzira chitambi chakanaka mupasipoti yako, uye hapana zvinodiwa pamutemo. San Marino ine pfungwa imwechete seSychelles ine meseji kune vashanyi: "Isu tiri shamwari nevose uye vavengi vasina." San Marino iparadhiso yeavo vanounganidza matampu.
Secretary of State weUS nhasi aburitsa kukwazisa kunotevera kuvanhu veSan Marino: Pachinzvimbo chevanhu veAmerica nehurumende yeUnited States of America, ndokumbirawo mugamuchire zvido zvangu zvakanaka kuvanhu veSan Marino pamunenge muchipemberera Mutambo we San Marino uye kuvambwa kwako kukuru republic. Kwemazana emakore, San Marino yakamira semuenzaniso wemweya wekusununguka. Isu tinocherekedza kukosha kwenhoroondo yeSan Marino sedunhu repasirese repasirese uye tinoremekedza kuzvipira kwako kwenguva refu kudemokrasi uye kuzvitonga. United States inokoshesa San Marino seshamwari inotsigirana, uye tinotarisira kuenderera mberi nekubatana kwedu.
Wechitatu waSeptember izuva remabiko eSt Marinus, Musande akavamba Republic yeSan Marino.
Mushure meMisa yeSolemn yapembererwa mu St. Marinus Basilica, zvisaririra zvevatsvene zvinotakurwa vachifora mumigwagwa yeguta. Mumasikati, mushure mekunge mhemberero dzechitendero dzapera, mhemberero idzi dzinotora chimiro chakakurumbira. At Cava dei Balestrieri mutambo we crossbow unoitwa, uye mu Piazzale Lo Stradone Hondo yeMasoja inopa konzati, ichiteverwa nechiitiko chakakurumbira kwazvo chebingo. Zuva rinovhara nekufema-kutora firework kuratidza.
Chirongwa chenguva pfupi
Chipiri 3 Gunyana
10.30 Kuverengwa kweChiziviso cheCrossbowmen
Mumigwagwa yeguta rekare
14.30 Kuenda kweiyo Inhoroondo Paradhiso
15.00 Munamato wevaCrossbowmen kune iye Patron Musande
15.30 Big Crossbow Tournament uye Kuratidzira Mureza
17.15 Yenhoroondo Peji Paradhiso
17.30 Konisheni yeYemauto Bhendi yeRepublic yeSan Marino
19.00 Big Bingo Chiitiko
MuRepublic yeSan Marino, kunamatwa kweMutsvene uyo, sekureva kwenhoroondo, akatanga iyo Republic, yakadzika midzi uye yakapararira. Ngano inotaurira kuti uyu nyanzvi yekucheka matombo akasiya sei chizvarwa chake cheArbe muDalmatia ndokuuya kuGomo reTitano kuzotanga diki revatendi vane shungu dzekutiza kushungurudzwa kwamambo Diocletian. Muna 301 AD, nharaunda yekutanga kubva kwakatangira Republic yeSan Marino, yakaumbwa.
Hwekutanga humbowo hwerusununguko rweSan Marino
Chokwadi ndechekuti nzvimbo iyi yaigara vanhu kubvira kare, asi gwaro rekutanga rinosimbisa kuvepo kwenzvimbo yakarongeka paGomo reTitano ndiPlacito Feretrano, hombodo inosvika 885 dc, yakachengetwa muState Archives.
Iwo Akajairwa Mauto anotora chikamu mumhemberero dzepamutemo uye anoshanda pamwe nemapurisa pane dzimwe nguva; nhengo dzeMasoja Bhendi vari chikamu cheVagari veMasoja.
Kutanga mirau nemitemo yeSan Marino
Panguva iyo simba rehumambo rakanga richidzikira uye simba renyika raPapa rakanga risati rasimbiswa, vagari vemo, sevaya vemamwe maguta eItaly, vakasarudza kuzvipa imwe hurumende. Nekudaro guta remahara rakazvarwa. Nharaunda diki iri paGomo reTitano, mukurangarira munhu anozivikanwa waMarinus, mucheki wematombo, anozvidaidza kuti "Nyika yeSan Marino", gare gare "Guta Mahara reSan Marino" uye pakupedzisira "Republic yeSan Marino". Hurumende yakapihwa kumusangano wemisoro yemhuri inonzi "Arengo" inotungamirwa naRector.
Sezvo nharaunda payakakura, Kaputeni Defender akagadzwa kuti agovane basa revakuru neRector.
Paingova muna 1243 apo maConsuls maviri ekutanga, maCaptain Regent, vakasarudzwa kuhofisi kwemwedzi mitanhatu; kusarudzwa kwemaviri-gore kunoitwa nguva zhinji kubvira ipapo kusvika zvino, nokudaro kuchisimbisa kugona kwemasangano.
Nguva dzose vachishushikana kusimudzira hukama nerunyararo, ivo Arengo vakagadzira nekuzivisa mitemo yekutanga, iyo Mitemo, yakafuridzirwa nemitemo yedemokrasi. Kunyangwe hazvo muna 1253 paine humbowo nezve kuvapo kwemitemo yekutanga, muna 1295 seti yekutanga yemitemo inowanikwa muRepublic of San Marino.
Kuzvimiririra kweSan Marino
Kutenda kune huchenjeri hwakafuridzira iro rekare guta remahara reSan Marino, nharaunda yakakwanisa kukurira mamiriro akaipisisa nekusimbisa kuzvimiririra kwayo.
Zviitiko zvenhoroondo zvaive zvakaoma uye zvavakawana kazhinji zvisina chokwadi, asi rudo rwekusununguka rwakagonesa guta remahara kuchengetedza rusununguko.
IRepublic yeSan Marino yakagara muchiuto nemauto, asi kwemwedzi mishoma chete panguva: muna 1503 naCesare Borgia, anozivikanwa saValentino, uye muna 1739 naKadinali Giulio Alberoni. Rusununguko kubva kuna Borgia rwakauya mushure mekudzvinyirirwa, nepo pachiitiko chaCardinal Alberoni, kusateerera kwevanhu kwakashandiswa kuratidzira kushungurudzwa uku kwesimba uye meseji dzepachivande dzakatumirwa kuti vawane kururamisira kubva kunaPapa uyo akaziva kodzero dzaSan Marino uye akadzorera rusununguko.
Napoleon Bonaparte akapa rukudzo kuSan Marino
Muna 1797, Napoleon akapa zvipo uye hushamwari kuSan Marino uye nekuwedzera kwemiganhu yayo. Vanhu veSan Marino vakatenda zvikuru uye vakakudzwa nerupo rwakadai, asi vakaramba nehungwaru hwepamoyo kuwedzera dunhu ravo, vachigutsikana sezvavaive ne "status quo" yavo.
Muna 1849, Giuseppe Garibaldi paakanga akakomberedzwa nemauto matatu emhandu mushure mekudonha kweRepublic yeRomania, akawana kuchengetedzeka kusingatarisirwi kwake uye nevamwe vake vapenyu muSan Marino.
Mutungamiri weAmerica Abraham Lincoln anokudza mugari
Mugore ra1861, Abraham Lincoln akaratidza hushamwari hwake nekuyemura kwaSan Marino paakanyora pakati pezvimwe zvinhu kune maCaptain Regent "Kunyangwe kutonga kwako kuri kudiki, zvisinei Nyika yako ndeimwe yevanokudzwa kwazvo munhoroondo yese ..".
Kusatsigira zvematongerwo enyika kweSan Marino panguva yechipiri Hondo Yenyika
San Marino inodada yakasarudzika tsika yekugamuchira vaeni. Iyi nyika yakasununguka haina kubvira yaramba hupoteri kana kubatsira kune avo vanotambudzwa nenhamo kana hudzvanyiriri, chero zvavo mamiriro kana pfungwa. Munguva yeHondo Yenyika yekupedzisira, San Marino yakanga isina kwayakarerekera, uye kunyangwe hazvo huwandu hwayo hwaive nevagari 15.000 chete, yakapa pekugara uye kupotera kune 100.000 vakabuda kubva kunzvimbo dzakatenderedza dzeItari idzo dzaive dzichirohwa bhomba.
IRepublic yeSan Marino ine hukama hwehukama uye hwehukama nenyika dzinopfuura makumi manomwe dzeEuropean uye dzisiri dzeEuropean.
Iyo inhengo yenyika yemamwe maInternational Organisations, senge United Nations Organisation (UNO) uye mazhinji ayo Mapurogiramu, Mari uye maAgency, senge United Nations Dzidzo, Sayenzi uye Tsika Sangano (UNESCO), United Nations Vana Fund ( UNICEF), iyo Food and Agriculture Organisation (FAO), International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), International Labour Organisation (ILO), World Health Organisation (WHO), World Tourism Organisation (UNWTO) , International Civil Aviation Organisation (ICAO), iyo International Maritime Organisation (IMO), iyo World Intellectual Property Organisation (WIPO), iyo Organisation yeChirambidzo Chemakemikari Zvombo (OPCW). Ichowo chikamu cheKanzuru yeEuropean uye neInternational Criminal Police Organisation (INTERPOL).
Republic yakave zvakare nehukama neEuropean Union kubvira 1991; inobatanidzwa muInter-Parliamentary Union, Paramende yeParamende yeKanzuru yeEurope neyeSangano reChengetedzo nekubatana muEurope (OSCE) nenhume dzayo dzedare.
Kubva muna Chivabvu 1990 kusvika munaMbudzi wegore rimwe chetero uye kubva muna Mbudzi 2006 kusvika Chivabvu 2007, San Marino yakabata hugaro hwemwedzi mitanhatu yeKomiti yeMakurukota eDare reEurope.
San Marino ine indasitiri inofamba uye yekushanya indasitiri.
Rumwe ruzivo rwekuti ungashanyira sei San Marino kushanya http://www.visitsanmarino.com